Gumaata Kaampaasii 8: 'Namoota gara Maarsiitti yeroo jalqabaaf imalan keessaa tokko ta'uun fedha' - BBC News Afaan Oromoo
Gumaata Kaampaasii 8: 'Namoota gara Maarsiitti yeroo jalqabaaf imalan keessaa tokko ta'uun fedha'
2 Amajjii 2019
Image copyright Eebbisee Waaqtolaa
Eebbisee Waaqtolaan jedhama. Waanan ta'uu fedhu galmaan gahuuf jecha barnoota Mekaanikaal Injinariingii Yunivarsiitii Finfinneetti waggaa lamaaf barachaa ture adda kuteen barnoota 'Aerospace Engineering' barachuuf Amerikaatti imale.
Kaayyoon koo hojjettuu buufata qorannoo hawaa/space station/ ta'uufi namoota yeroo jalqabaaf gara Maarsitti imalan keessaa tokko ta'uudha.
Wallagga Lixaa Ayirattiin dhaladhe. Kaniin guddadhe garuu Finfinneetti. Barnoota sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa mana baruumsaa Beeteel Makaane Yesuusittiin baradhe. Kutaa 11 fi 12 ammoo Kaateederaalittiin xumure.
Waggaa 5 keessatti yunivarsiitii itti barattetti Pireezidantii itti-aantuu taate
Yeroon sadarkaa tokkoffaa baradhu tokkoffaan bahan ture, sadarkaa lammaffaattis sadarkaa hinuman argadha.
Sadarkaa lammaffaarraa qabee barnootni herreegaa fi Fiiziksii wanta isaan gahumsa koo qoraniif nan jaaladha ture.
Yeroon Sadarkaa lammaffaa baradhudha kaniin Astroo Fiizistii ta'uu akkan fedhu bare. Oogummaan kun wantootaan jaaladhu lama Astroonomi fi Fiiziiksii waan walitti qabateefiidha.
Gosti barnootaa kun jiraachuu hin beekun ture yeroon kutaa sagal baradhu barsiisaan keenya digirii lammaffaa isaa Astroo Fiisksii akka baratu dhagaheen aniis akka isaa ta'uu hawwe.
Turtii koo Yunivarsiitii Finifnnee
Qorumsa biyyoolessaa kutaa 12'n qabxii gaarii galmeesiseen barnoota Injinaringii barachuuf Yunivarsiitii Finfinneetti ramadame. Wayita fedha barnootaa keenya guunnu yeroo fudhadheen yaade.
Barnootni ani hedduu barbaadu Astroo Fiisksiin sadarkaa digirii jalqabaatti waan hin kennamneef digirii jalqabaa Makaanikaal Injinariingiin xumuruuf murteesseen barnoota koo eegale.
Namniin akka fakkeenyaatti ilaalu Ijinar Qixaaw Ijjiguus Makaanikaal Injinariingii baratee waan tureef kana kanatu garasitti akkan galu na kakaase.
Waggaa lamaaf barnoota Injinariingii kana hordofaa tureen gara Ameerikaatti imale.
Amma Barnoota 'Aerospace Engineeriing/iif' Ameerikaan jira
Barnoonni Injinariingii Makaanikaalaa waan hedduu baldhaa ta'eef garan hedduu barbaaduutti waan na hin siqsineef carraalee gara 'Aerospace engineering' na geessan barbaadutti tureen; boodas milkaa'een 'student visa' argadhee amma biyya Ameerikaan jira.
Amma koleejjii Miniyaapoolisitti barnoota gara muummee 'Aerospace engineering' tti na ceesisuun barachaa jira.
Jalqaba yeroon dhufu aadaawwan garaagaraa addana jiranitti madaquuf yeroo muraasa na gaafateera. Nama waan hubataniif garuu hedduu na hin rakkifne.
Akka hojiiitti wantiin ta'uu fi gochuu barbaadu 'space agent' tokkoof 'NASA's haa ta'u 'Space X'tti Yiroospees Injinarii ta'uun barbaada.
Gara Maarsiitti ergaama nama qabatanii imaluuf jiru keessatti namoota yeroo jalqabaaf garasitti imalan keessaa tokko ta'uun barbaada.
Goodayyaa suuraa Hasxaa Gumaata Kaampaasii
Eessumni koo waayee Astroonomii yeroo baayyee natti himaa waan tureef qalbiin koo keessa fedhi kun cimaa fi jabaachaa dhufuun abjuu kana akkan qabaadhu na taasiseera.
Raajii Ashannaafi maaliif 'Theoretical Physicist' ta'uu fedhe?
'Hojii humnaan of barsiisuu kutaa 8 irraan eegale'
Dargaggummaa koo kanatti galmootan kaawwadhe bira akkattin gahuu danda'urrattin hojjedha. Yeroon boqonnaa barbaadu hiriyyoota koo waliin haasa'uun natti tola.
Kana dura hiriyyaa dhiiraa hin qabu. Haala amma jiruunis hiriyyaa dhiiraa qabaachuu hin barbaadu. Yeroon itti hariiroo akkasii keessa galuu qabu hin geenye jedheen amana.
Amma xiyyeeffannaa koo guutuu barnootaa fi abjuu koo dhugoomsuurran gochuu qaba jedhee of amansiise.
Dhaamsan Dargaggootaaf qabu
Jireenya keenya keessatti kaayyoo qabaachuun ni barbaachisa. Yoo waan ilaallu qabaanne, lafa gahuu barbaannu yoo qabaanne wanta fedhe ta'uun ni danda'ama.
Ofirratti hojjennee kaayyoo keenya barree, sana booda kaayyoo keenya kana milkeessuuf jabaannee hojjechuun baayyee barbaachisaadha.
Gumaata Kaampaasii 5: 'Hojii humnaan of barsiisuu kutaa 8 irraan eegale'
12 Muddee 2018
"Xalayaa fuula tokkoon qabsoo diignee galuu hin dandeenyu"
'Koreen, waraana na jalatti diigaa jira'
Kun kanniisa moo awwaannisa?
'Alarraa ergama fudhattanii mooraa jeeqxu jechuun nu ari'an'
Waldaaleen Kiristaanaa tajaajila guyyaa Dilbataa dhiisuuf
Piroojektii misooma qarqara laggeenii magaalaa Finfinnee
'Ajaja hayyu duree ABO fi waamicha Abbootii Gadaa kabajnee galle'
Shamarree akka ulfoofte osoo hin bariin mucaa deesse